Guddoomiyaha Baarlamaanka oo la kulmay Danjiraha Turkiga ee Soomaaliya – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo la kulmay Danjiraha Turkiga ee Soomaaliya
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho.
Kulankan oo ka dhacay Xafiiska Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa waxaa Guddoomiye Jawaari iyo Danjire Olgan Bakar uga wada hadleen dedejinta dib u dhiska xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho kaasi oo ay
hada gacanta ku heyso hay’adda TIKA ee dalka Turkiga ayadoo mashruucaasina uu hada diyaar yahay islamarkaana ay soo gebagebowday qiimeyntii lagu sameynayey xarunta Golaha Shacabka, dhowaanna si rasmi ah ayuu u bilaaban doonaa dib u dhiskeeda.
Kulanka intii uu socday waxaa sidoo kale looga wada hadlay dar dar gelinta wada shaqeynta guddiyada saaxiibtinimo ee Baarlamaannada Soomaaliya iyo Turkiga taasi oo la isla gartay iney tahay mid muhiim ah oo aan laga maarmin.
Danjire Olgan Bakar danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho ayaa uga mahad celiyey baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ansixinta ay dhowaan ansixiyeen heshiiska dhanka Caafimaadka ah ee
Soomaaliya iyo Turkiga kaasi oo ay Baarlamaanka Federaalka u soo gudbisay Wasaaradda Caafimaadka.
Ugu dambeyntii Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” oo xaga siyaasadda ka hadlayey ayaa ka codsaday dowladda Turkiga iney gacan buuxda ka siiyaan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya hirgelinta arimaha doorashooyinka la filayo in ay Soomaaliya ka dhacaan dhammaadka sanadkan 2016.
Shir Cadaaladda looga hadlayo oo ka furmey Muqdisho-Sawirro
Mudanayaasha Baarlamaanka oo dood ka yeeshay hindise sharciyeedka dhismaha Xisbiyada Siyaasadeed